Zafinandro Viviane Dewa : hanarina ny fizahantany any Anosy | NewsMada
Mbola voafidy filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Office régional de tourisme faritra Anosy, Rtoa Zafinandro Viviane Dewa. Tsy vahiny any an-toerana izy satria mahafantatra tsara ny tontolon’ny fizahantany. Misy ny ezaka efa vitany fa betsaka ihany koa ny asa miandry azy sy ireo mpandraharaha tanora miaraka aminy any Taolagnaro ho fiatrehana ireo sakana maro nampihemotra ny fizahantany any amin’iny faritra Anosy iny. Anisan’ny sakana lehibe ny faharatsian-dalana, na avy any andrefana na atsinanana, eo indrindra koa ny tsy fandriampahalemana.
Na misy seranam-piaramanidina aza ao Taolagnaro, lafo loatra ho an’ny rehetra ny saram-pitaterana amin’ny fiaramanidina ato anatiny. 1 tapitrisa Ar hatramin’ny 1,2 tapitrisa Ar Antananarivo –Taolagnaro, mila efa hitovy mankany Nosy Maorisy. Marihina anefa fa tokony hisokatra voalohany amin’ny Malagasy ny fizahantany ato anatiny, hahafantaran’ny Malagasy ny tanindrazany. Tsy izany ny zava-misy fa raha vao mpizahatany, vahiny avy hatrany no an-tsain’ny maro. Nefa noho ireo olana isan-karazany ireo, tsy mahasarika vahiny firy ny fizahantany any amin’ny faritra Anosy.
Na izany aza, tsy tapaka ny fidiran’ireo sambo vaventy mitondra mpizahatany any Fort-Dauphin. Ny 13,14,15 janoary ho avy izao, handalo any an-toerana ny “Europa”, mitondra mpandeha 500 ary ny iray “Ocean dream”, mitondra mpandeha 1.350, ahitana mpizahatany japoney maro anisa. “Ocean Dream” izay mitety ny tapany atsimon’ny tany.